Ireto ny fomba fanalana ny tasy rehetra amin'ny tarehy : mony, tai-parasy, panda, fahanterana • Madagossip
il y a 2 années 34.4 K
Ireto ny fomba fanalana ny tasy rehetra amin’ny tarehy : mony, tai-parasy, panda, fahanterana. Na izay mety ho tasy rehetra e!
Dintin-tsavony Nosy + Tantely + Masonjoany
Atao mitovy fatra ary afangaro. Rehefa mifangaro tsara dia atao sarona (masque) ka 30mn ny faharetany.
Kobanina amin’ny ravim-boafotsy mangatsika.
Asio menaka manify izay anananao amin’ireto : Menak’omby tsisy fofona, Tournesol, Soja, Amande douce, Olive, Jojoba, Carotte, Argan.
Atao isan’andro. Afaka 7 andro raha mahavatra dia hisy fiovana.
Ny mpisotro toaka na ireo mpiari-tory matetika dia mora miroraka sy mikentrona alohan’ny fotoana ny endrika, mbola mety hisy panda koa miampy ilay lavadavaky ny mony ireny. Ity sarona faharoa ity zany, sady manala ireo no haingam-piasa kokoa!
Talc bébé 1/2 sotro kely + Tantely 1 sotro lehibe
Afangaroy ireo, ahodikodino amin’ny fanondro mandrapahazo paty marihitra.
Rehefa voadio tsara ny endrika, dia asio ranom-boasary makirana ny tanana ka pehopeho ny fanosorana azy amin’ny tarehy. Avelao ho maina tanteraka vao saromana ny paty vita etsy ambony. Faharetany eo 45mn, akobana amin’ny ravim-boafotsy mangatsiaka, ary orina amin’ny menaka manify.
Afaka atao isan’andro : 3 andro dia mahita vokatra.
Mahavara fa tena hadio ny tarehinao !
Tagsacné masque mony panda soin visage tai-parasy
Tandremo! Tsy miaro 100 % amin’ny valan’aretina peste ireny cache-bouche masque chirurgical ireny